Nnwom 76 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Nnwom 76 - Nkwa Asem (NA-TWI)
1Wonim Onyankopɔn wɔ Yuda. Wɔhyɛ ne din anuonyam wɔ Israel. 2 Ɔwɔ ofi wɔ Yerusalem; ɔte Sion Bepɔw so. 3 Ɛhɔ na obubuu atamfo agyan, wɔn kyɛm, wɔn nkrante ne wɔn akode nyinaa.
4 O Onyankopɔn, w’anuonyam so! Wufi mmepɔw no a wudii w’atamfo so no so reba wo tumi so. 5 Woagye wɔn asraafo akokoduru no ho nneɛma nyinaa ama wɔada awufo nna. Wɔn ahoɔden ne wɔn nyansa nyinaa yɛɛ kwa. 6 Wobɔɔ wɔn hu no, O Yakob Nyankopɔn, apɔnkɔ no ne wɔn sotefo nyinaa wuwui. 7 Na wo Awurade de, obiara suro wo. Sɛ wo bo fuw a, obi ntumi nnyina w’anim. 8 Wubu atɛn fi soro; wiase suroe na ɛyɛɛ dinn, 9 bere a wosɔre buu atɛn a wode gyee wɔn a wɔhyɛ wɔn so no no. 10 Nnipa abufuw de ayeyi a ɛdɔɔso brɛɛ wo. Wɔn a wɔanwu ɔko no mu no, bɛhyɛ wo fa no nyinaa bi.
11 Nea wode ahyɛ Awurade wo Nyankopɔn bɔ no, fa ma no. Aman a mobɛn nyinaa mommrɛ no akyɛde. 12 Onyankopɔn ma nnipa suro no; ɔbrɛ ahenemma ahantanfo ase, na ɔbɔ ahene akɛse hu.
NA-TWI : Nnwom 76